Performancerụ ọrụ agụmakwụkwọ mgbe ọ gbasịrị ọrịa afọ
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » mmụta » Ọmụmụ arụmọrụ mgbe ọrịa strok na-eto eto
Ọrịa ọgbụgba bụ ihe anyị na-akpakọrịta na ime agadi na nká, ọtụtụ mgbe, tinyere ihe ndị dị ize ndụ dị ka ị smokingụ sịga ma ọ bụ nri adịghị mma. A na-ahụkarị nsonaazụ na nsonaazụ nke ndị ọrịa na-enwe ọrịa ụbụrụ na-eme nke ọma. N’ezie, anyị na-atụ anya ọdịda ọgụgụ isi  ma ọ bụ mmekpa ahụ chọrọ njikwa zuru oke .
Agbanyeghị, enwere ọnọdụ dị obere ma bụrụ nke ekwesiri ilebara anya: pediatric ischemic strok. Agbanyeghị na-esighi ike, ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa na-akpata mmebi ụbụrụ na nwata, ma na-emetụta usoro ọtụtụ ụkọ ihe nwere Ihe ọ rụpụtara na arụmọrụ ụlọ akwụkwọ n ’ụzọ nghọtabeghị ya.
Agbanyeghị, ọtụtụ ọmụmụ egosila na ọrịa strok nwere ọrịa nwere ike ịnwe ihe ruru 40% ma na-eduga na ụkọ akwara ogologo oge n'ihe dị ka 80% nke ndị dị ndụ. Mpepu ndị a nwere ike ịgụnye ịkọ nkọ na nke na-abụghị ikwu okwu, ọsọ nhazi, nka ọgụgụ na mgbakọ na mwepụ, yana asimmikoloji na-emetụta mmụọ. Ha jikọrọ aka, mmebi ndị a na - eme ka ụmụaka bụrụ ndị ihe nhịahụ metụtara agụmakwụkwọ na yikarịrị ka a ga-achọpụta na ha nwere nsogbu mmụta. 
N'ụzọ doro anya, ịdị ogo nke ọghọm ndị a na-adabere n'ọtụtụ ihe, gụnyere ọnọdụ yana ọnya ọnya, yana afọ ole ọnya ọnya ahụ na-adị. Ọdịiche nke ụbụrụ n'oge mmepe, gụnyere ndetu ya plastik ya adịghị ike, ekwesiri iburu n'uche.
Ọmụmụ nke Champigny mere n'oge na-adịbeghị anya na ndị ọrụ ibe  nyochara ọrụ agụmakwụkwọ nke ụmụaka 29 bụ ndị nwere ọrịa strok ma were ha tụnyere otu ụmụaka 34 na-etolite n'otu afọ. Ndị sonyere na nyocha, nke dị n’agbata afọ 8 na 18, nwere nyocha neuropsychological; Ọzọkwa, a na-echebara akara nke ụlọ akwụkwọ ha echiche, a na-enyochakwa nsogbu agụmakwụkwọ na nke mmekọrịta ha, opekata mpe na ihe ndị mụrụ ha mere.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Ose na Nnu 2.0
Nsonaazụ gosipụtara nchegbu nne na nna banyere ọghọm enwere na ọgụgụ, okwu nkwupụta, nsogbu mgbakọ na mwepụ, aka ederede na ikike icheta ozi.
Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na ọtụtụ n'ime ndị ọrịa ahụ na-anata ụdị ụfọdụ Inye akwukwo, dịka atụmatụ agụmakwụkwọ ahaziri iche, nkwado, enyemaka ndị ọzọ ma ọ bụ ọbụna ịnweta teknụzụ na-enyere aka (site na kọmputa na mbadamba). Ọzọkwa, ụmụaka nọ n'azụ mmụọ ọrịa strok yikarịrị ka ha nwere nsogbu mmụta (41%).
Tụnyere ntụle neuropsychological, ụmụaka nwere ọrịa strok gosipụtara a nkwụsịtụ na ozi nhazi na otu na-erughị okwu echiche, na agbanyeghị na-enweghị nkwekọrịta na-enweghị isi -abụghị okwu.
Banyere mmụta ụlọ akwụkwọ (ọgụgụ, ịghọta ikpe, ide na mgbakọ na mwepụ), ndị nchọpụta ahụ mere ka ihe isi ike pụta ìhè na isiokwu ndị nwere ọrịa strok nwetara ọtụtụ budata ala karịa ndị ibe ha. Nchọpụta ndị ọzọ mere gosiri na adịghị ike ndị a o nweghi ihe metụtara ọnọdụ ọnya ọnya ahụ (aka nri ma ọ bụ aka ekpe).
N'ụzọ dị ịtụnanya, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na o siri ike na mmụta ụlọ akwụkwọ, ụmụaka post-strok ha nwetara akara mmụta ahụ dịka nke ndị ọgbọ haagbanyeghị na nke a nwekwara ike ịdabere na mmalite hazie.
Na mmechi, ihe ndia rụpụtara anyi n'ihu nke mmetụta ọrịa strok nwata nwere ike inwe na ọnọdụ ụlọ akwụkwọagbanyeghị na nke a nwere ike agaghị apụta ìhè ozugbo site na ntuli aka ndị enwetara.
N’agbanyeghi oke nyocha - dịka ọmụmaatụ, pere pere mpe - a na-enye ozi dị ụtọ maka ọmụmụ ihe n’ọdịnihu. Ajụjụ ụfọdụ kwesịrị ịchọta ohere na nyocha ọzọ, maka ọmụmaatụ, kedu ọnọdụ ụmụaka na-enweta onwe ha mgbe ọrịa strok ma ọ bụrụ na ha bi karịa n'ọnọdụ, ebe atụmatụ nkwado ahaziri iche na teknụzụ na-enyere aka adịghị?
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Ntughari iPad na post-strok: nyocha dị ụtọ
N'ihi ya, achọrọ usoro ọmụmụ buru ibu iji nyochaa nyocha ọfụma ọfụma ọrịa pediatric na mmụta na otu esi ejikwa nsogbu ndị na-esite na ya.
 Ọrịa Mkpọnk. (2015). Ntụziaka zuru oke maka nsogbu ọgụgụ isi mgbe ọrịa strok gasịrị. Ewepụtarala ọnwa June, 8, 2017.
 Pruski, A. Ọnọdụ mgbake ọkwara. John Hopkins Medicine.
 Champigny, CM, Deotto, A., Westmacott, R., Dlamini, N., & Desrocher, M. (2020). Nsonaazụ agụmakwụkwọ na ọrịa strok ụmụaka. Ọrịa Neuropsychology, 1-17.
ụmụaka, mmerụ ahụ n'ụbụrụ, ọgụgụ isi, ọrịa strok, afọ ischemic, ọrịa ọnya na-efe efe
Ọmụmụ arụmọrụ mgbe ọrịa strok na-eto eto2020-08-062020-09-20http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/08/ictus-ischemico-pediatrico.jpg200px200px
Nyochaa nchegbu na nsonaazụ yaMmụta, Edemede, Omume, Usoro Ọmụmụ